ContentVerse: fitantanana antontan-taratasy sy ny automatisation d'exploitation | Martech Zone
ContentVerse: fitantanana antontan-taratasy sy ny automatisation d'exploitation
Alatsinainy Martsa 3, 2014 Douglas Karr
Ny ankamaroan'ny tontolon'ny orinasa dia mbola mampiasa sy manaparitaka ny atiny amin'ny alàlan'ny sehatra Microsoft Office. Raha te hihazona ny fifehezana kinova ny antontan-taratasinao sy hampandeha mandeha ny dalanao ianao dia tsy ho vita mihitsy izany raha tsy misy fitaovana mandeha ho azy amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny automatisation workflow ary ny tahirinkevitra iray hitazomana ny famolavolana mandritra ny fiaraha-miasa.
Ireo masoivohon'ny varotra - indrindra ny paikadim-barotra momba ny votoaty - dia mamokatra iray taonina amin'ity atiny ity amin'ny lozisialy desktop mahazatra. Ary ny fikarohana ny rafitra fandidiana dia tsy ny fomba mora foana hahitana ireo antontan-taratasy, ary tsy ny backup koa no fomba tsara indrindra fitehirizana azy ireo. ContentVerse dia safidy tsy lafo, karama isaky ny mpampiasa, mitahiry, mikaroka, mahita ary mitahiry ny antontan-taratasinay - na inona na inona karazany.
Fitantanana antontan-taratasy - mailaka, scan, drag-and-drop, batch, fisamborana, hitsitsy mivantana, tsindrio havanana.
Manova atiny - fanehoan-kevitra mivantana miaraka amin'ny markup: anotations, redactions, tombo-kase manokana, fankatoavana, taratasy miraikitra, fampisongadinana, sonia elektronika, fanehoan-kevitra.
Mikaroha sy tantano - Famaritana anarana sy fitehirizana ao anaty kabinetra sy ny firafitry ny fampirimana mahazatra, voatanisa ho fikarohana sy fitadiavana lahatsoratra feno avy hatrany.
Ataovy mandeha ho azy ny atiny - Fizarana mandeha ho azy ny fampahalalana miaraka amin'ny fanairana fampandrenesana miompana amin'ny asa ao anaty workflow miorina amin'ny GUI.
Mizarà atiny - Ny fanovana ny fisie dia arahana ao amin'ny rafitra - isaky ny kinova misy ny rakitra azo alaina.
Diovina rehefa tonga ny fotoana - Politikan'ny fitazonana ny fanesorana mandeha ho azy na ny fitahirizana fampahalalana efa lany andro.
Tags: archivingfanaraha-maso ny taratasybiraosharepointversioningWorkflow automation
Mashape Mampifandray ireo mpampivelatra sy API
Taona nisian'ny orinasa madinidinika ara-tsosialy